Shiinaha waligiis waxaa loogu yeeri jiray warshada aduunka. Iyadoo la hagaajinayo awoodda dhaqaale ee Shiinaha oo dhameystiran, awoodda ballaaran ee suuqa ayaa ka dhigtay suuqa Shiinaha inuu yahay mid u baahan calaamadaha caalamiga ah. Shirkado caalami ah iyo sumado caalami ah ayaa ku deg degay suuqa Shiinaha waxayna sare u qaadeen warshadaha baabuurta ee Shiinaha. Iyadoo la horumarinayo warshadaha sahayda, Shabakadda Isku-xirka Gawaarida Warshadaha Adduunka waxay dejisaa noocyada wax soo saarka baabuurta Shiinaha. Shiinaha wuxuu noqday meel ay isugu yimaadaan shilalka gawaarida ee caalamka wuxuuna noqday meesha ugu weyn ee iibsadayaasha caalamiga ah.
Iyada oo la cusbooneysiinayo isticmaalka baabuurta, suuqa qalabka baabuurta ayaa sidoo kale u baahan jiil cusub oo alaab ah si loola socdo. Waxaan soo bandhignay cirbadeynta cirbadaha cirbadaha ee loo yaqaan 'TPE cirbadaha', waxaanan dhalannay jardiinooyinka lugta ee Jarmalka iyo Austrian, iyagoo u keenaya milkiileyaasha baabuur khibrad caafimaad iyo mid aamin ah
Ugu horreyntii, aan ka hadalno farqiga u dhexeeya habka wax taaj oo kale ee duritaanka iyo habka finka:
1: Kala duwanaanshaha alaabta ceeriin
Nidaamka cirbadeynta cirbadeynta waxay u baahan tahay in lagu horumariyo 100% qalabka TPE saafi ah, iyo habka finku inta badan lagu qaso TPO ama TPV-like TPE xeryahooda, iyo nadiif ahaanta finku ma fiicna sida wax isku duro oo kale. Sidaa darteed, cirbadda gawaarida ee TPE-ga oo cirbadeysan oo hal-cirbad leh ayaa yeelan doonta qaab-dabacsan oo is-bedbeddela, una dhow caag, iyo dareemid cag fiican. Wax soo saarka laga sameeyay tiknoolajiyada finku waa adag yihiin, oo la mid yihiin balaastigga, waxayna dareemi doonaan daal markii ay wadaan masaafo dheer.
2: Kala duwanaanta cimri dherer
Cirbadda cagta ee TPE oo la mideeyey waxay leedahay adkeysi. Ka dib markii uu ku xumaado mudada dambe ee la isticmaalo, waxaa dib loogu soo celin karaa qaabkiisii ​​asalka ahaa iyadoo lagu shubay biyo karkaraya ama loo bandhigayo qorraxda muddo cayiman.
Tijaabada leexashada gawaarida DEAO: dib u soo celi qaabkii asalka ahaa dhowr saacadood ka dib soo-gaadhistii.
Suufka khariidadu way duuduubmi doonaan ka dib 1-2 sano oo la isticmaalayay dibna looma soo celin karo.
Farqiga u dhexeeya labada astaamood wuxuu ka yimid:
Qalabka ceeriin ee habka wax taaj oo kale ee duritaanka ayaa loo kala saaray mashiinka wax lagu durayo oo lagu dareeraa heerkulka sare ka hor inta aan loo qaabeynin caaryada.
Nidaamka khariidaddu waa in marka ugu horreysa laga dhigo maadada gogol fidsan, ka dibna la kululeeyo si loo jilciyo loona nuugo caaryada si ay u qaboojiso una qaabeyso.
Shayga u dhigma cirbadeynta ayaa leh qaabka sheyga laftiisa, halka badeecada finku leedahay hal dhinac oo kaliya oo ah qaabka qaabaysan, soo kabashada dabiiciga ahna aad ayey uga yartahay tii hore.
Gogosha baabuurta nabarrada leh ee milkiileyaasha baabuurta.
3: Kala duwanaanshaha qaabeynta qaabka
Faa'iidada isticmaalka a-lakabka laba-lakabka caaryada cirbadaha gaarka ah waa in dusha sare ee dusha sare loo qaabeyn karo si aad u badan, siinta naqshadeeyayaasha meel bannaan oo hal abuur leh.
Waxaan u qaabeynay qaabab gaar ah astaan ​​kasta, faahfaahintuna way ka taajirsan yihiin, qaabab walbana waxay leeyihiin shati tusaalayn oo ka dambeysa.
Mashiinka khariidadu wuxuu sameyn karaa oo keliya khadadka fudud, isku mid.
4: Farqiga u dhexeeya naqshadeynta xargaha
Xarkaha laba-lakabka ah ee loogu talagalay habka wax lagu duro ee duritaanka ayaa ah mid sii waara. Qeybta hoose ee suufka cagaha waxaa loogu talagalay adkeyaal dheeri ah oo ka hortagga-cilladda ah. Xadhiggu sidoo kale waa cirbad ka sameysan caaryar yar oo sax ah, oo ka xoog badan.
Si kastaba ha noqotee, habka finku waa mid khafiif ah. Haddii xarigga lakabka laba-geesoodka ah loo qaabeeyey, xoogga iyo adkaysiga sariirta gaariga waa tijaabo weyn. Tani waa mid ka mid ah sababaha aysan derbiyada gawaarida finanka leh ee dibadda aysan u lahayn naqshad laba-lakab ah.
Ugu dambeyntiina, muxuu Deao ugu adkeysanayaa inuu sameeyo hal xabbad oo cirbadeysan oo loo yaqaan 'TPE' derin baabuurs
Sababtoo ah DEA ​​had iyo jeer waxay leedahay khibrad badan oo xagga horumarka ah ee gogosha baabuurta ee asalka ah! Waxaan rabnaa inaan keenno derin kafiican kuwa ugu badan milkiilayaasha baabuurta. Kaliya heerarka gawaarida ee isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan oo TPE ah ayaa keeni kara run ahaantii jawi saaxiibtinimo leh iyo khibrad wadis la'aan.
Waqtiga boostada: Nofeembar-24-2020